GWS/023/03 London, 30/07/2003
Waxaa baryahanba si isdaba joog ah u soo badanaayay qilaaafka madaxda Soomaalida ee ka qeyb galeysa shirka ka soconaya duleedka magaalada Nairobi, Kenya, gaar ahaan magaalada Mbaghati.
Qilaafyadan soo kala dhex galay madaxda Soomaaliyeed, ka dib saxiixii 05/07/03, gaar ahaan TNG, maamulka DGP iyo ururada rayidka iyo diidmada Jamhuuriyadda iskeed isku magacowday ee Somaliland, sababna u noqday in madaxda qaarkood ay ka caraabaan shirka, isla markaana ay soo kordheyso eedeymaha loo jeedinayo dowlaha qaarkood ee gobolka in ay carqalad ku yihiin shirka, in shaqsiyaad Soomaali ah iyo dowlado ajnabi ah halgan ugu jiraan in luqadahooda lagu daro laqudaha looga hadlo Soomaaliya, ayay nala tahay haddii aan nahay Golaha wadatashiga Soomaaliyeed.
1- In laga faa'iideysto fursadan qaaliga ah ee loo huray in lagu heshiisiiyo Soomaalida, laguna soo dhisayo dowlad Soomaaliyeed oo loo dhan yahay, si xal kama dambeys ah loogu helo dadka Soomaaliyeed, oo muddo dheer u oomanaa soo celinta sharcigii iyo kala dambeyntii la waayay, una dhibaatoonaya dowlad la'aan darteed.
2- In la joojiyo eedeymaha aan salka laheyn ee loo jeedinayo dowladaha safka hore uga jira sidii xal loogu heli lahaa dadka Soomaaliyeed, isla markaana marti galiyay qoxootiga Soomaaliyeed qaran jabkeenii ka dib.
3- In aysan madaxda Soomaaliyeed horseed u noqon in la qeybiyo laguna tunto xuquuqda ummadda Soomaaliyeed mar kale.
4- In qilaafyada u dhaxeeya madaxda Soomaaliyeed lagu xalliyo wada-hadal iyo is faham, suurta galiya dhisme dowlad Soomaaliyeed, iyagoo danahooda gaarka ah ka horumarinaya danta guud ee ummadda Soomaaliyeed.
5- In madaxda Soomaaliyeed aysan sabab u noqon in dhiig hor leh lagu daadiyo dhulkeena iyo halganka ay ugu jiraan madaxtinimada dalka Soomaaliya.
6- In Hogaamiyayaasha Soomaaliyeed ay dhowraan Diinta, Dhaqanka suuban ee dadkooda, ilaaheyna ka yaabaan, isla markaana u naxariistaan dadkooda dhibaatoonaya.
7- In aad isu tanaasushaan si loo badbaadiyo magacii iyo sharaftii shacbiga Soomaaliyeed ku lahaa ummadaha adduunka.
8- In madaxda Soomaaliyeed ay diidaan, marnabana aysan oggolaan in dowladaha shisheeye qaarkood oo u ololeynaya iyagoo adeegsanaya shaqsiyaad ajnabi ah iskalana weyn Soomaalinimada, asalkooduna yahay Soomaali, in luqadahooda lagu daro luqadaha looga hadlo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya, gaar ahaan luqadda Talyaaniga oo looga hadlin adduunyada meel kale oo aan aheyn Italy, isla markaana uusan naga dhaxeyn xiriir xagga diinta, dhaqanka, iyo caadooyinkaba.
9- In adduunweynaha iyo dowladaha qaarkood iyo shaqsiyaadka u adeega gumeystuhu ogaadaan in Soomaalida uun ay xaq u leedahay aaya-katalintooda iyo xal u helidda arrimahooda.
10- In dowladaha qaarkood joojiyaan faragalinta tooska ah ee ay ku hayaan arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya.
11- Waxaan mar kale cusbooneysiineynaa diidmadeedii in ciidamo shisheeye ahi yimadaan dalka Soomaaliya.
12- Waxaan guud ahaan ugu baaqeynaa in dadka Soomaaliyeed u dareeraan sidii ay qeyb uga noqon lahaayeen joojinta dhiiga caadada u noqday in macne la'aan loo daadiyo.
13- In qeybaha ka baxay iyo kuwa ka maqan shirka dib ugu soo laabtaan, si loo suura galiyo dib u heshiisiin dhex marta dadka Soomaaliyeed.
14- In laga saaro dastuurka qodobada wax u dhimaya midnimada iyo wadajirka shacbiga Soomaaliyeed, gaar ahaan qodobada hadlaya Diinta, Federaalka, iyo Afafka qalaad.
15- In loo hogaansamo xaalad kasta oo suurta galineysa in uu guuleysto shirka Soomaalida iyo bulshada caalamka ay waqtiga badan u hureen sidii loo najixin lahaa, isla markaana aad horseed u noqotaan dhisme dowlad Soomaaliyeed.
Kaaliyaha Xoghayaha arrimaha Dibadda ahna Wakiilka